Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fitsapana, fanandramana, fialana nenina | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: fitsapana, fanandramana, fialana nenina
Tsy misy fanavakavahana fa bamba iray no amonosana ny mpitandro filaminana na zandary na pôlisy sy ny mpitsara raha ny fandravaravan’ny fanaovana kolikoly eo anivon’ny sokajin’ny mpiasam-panjakana samy hafa no atao anton-dresaka. Mifandany hatrany ireo rantsana telo ireo araky ny fiheveran’ny mponina.
Tsara tsipihina fa na manana ny maha-izy azy aza ny fikambanana manao ny fikarohana sy ny kajikajy mikasika ny fitoerana sy fipetraky ny kolikoly eo anivon’ny firenena samy hafa, ny ako nangoniny teo amin’ny fiarahamonina dia manana anjara ao anatin’ilay kajikajy. Noho izany, na eo aza ny filamatra teknika enti-manao, eo andaniny koa ny fiheveran’ny mponina araky ny fahatsapany ny fiantraikan’io tranga io amin’ny fiainana andavan’andro.
Tsy milaza akory izany fa diso ireny vokatra nambara ireny, fa fitaovana afaka ampiasaina ho an’ny fandinihana ny fomba fitantanana. Tsy izay anefa no ahafahan’ny tsirairay hitsaratsara fahatany ny pôlisy na zandary na mpitsara amin’ny fiheverana fa rehefa pôlisy na zandary na mpitsara dia tranon-kolikoly avokoa. Lavitr’izany no voambaran’ilay sampana mpanara-maso.
Rehefa eo anefa ny fampielezana an’izany vokatra izany tonga ho azy ny fiheverana fa any ifotony no mandringa ny fijoron’ny atao hoe «tany tan-dalàna» : ny fitsarana ara-drariny sy ara-dalàna no antoky ny «tany tan-dalàna».
Eo no nanao safidy ny fitondrana vaovao izay eo am-pandaminana ny tetika sy fomba hitantanany. Anisan’ny tanjona napetrany ny fampiharana ny lalàna amin’ny fomba hentitra sy ny fandresena ny fanaovana kolikoly, na tiana na tsia dia tsy hita ho dinganina ny fanomezana andraikitra ny mpitsara eo amin’ny fanaovana ezaka ho amin’izany. Ny fitondrana eo amperin’asa no nomen’ny vahoaka fitokisana. Arak’izany, azo heverina fa na fanamby aza no ataony dia efa nodinihany am-pahendrena izany mialoha ny firobohany amin’ny lalina.
Raha maro ireo mpitsara notendrena amin’ny toerana ambony nanankinana andraikitra, azo inoana fa tsy fanirahana amalona hatsaka izany, no tsy fanomezana toky am-pikipiana fa eo ihany ny fanaraha-maso. Heverina koa fa tsy ho diso fanantenana ambony ihany, raha notovoizina ny tsara ka sanatriavina jifa. Ny ambony sisa tavela no hany iankinan’ny fitsarana manara-penitra arak’izany hoe «tany tan-dalàna» !
Toy ny mpiralahy mianala ireo mpianadahy (mpitsara) miray antoka (tokin’ny tany tan-dalàna) ireo : raha fahadiovana no kasaina, adidin’ny efa afaka no mikosoka ny tsikoko manera-batana sy mamafa ny oron’ireo namany mbola mitaiza lelo ambony molotra.